Lesona momba ny fanaratsiana: Blaogera avy ao Afrika Atsimo enjehina ho nanoso-potaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2019 8:28 GMT
Raha nieritreritra ny hanenjika ny blaogera Donn Edwards ho nanala baràka azy ny Quality Vacation Club (QVC), dia mety hampangininy avokoa ny rehetra mpitsikera ny tetika fanaovana varotra mampiahiahy ataon-dry zareo, diso izy ireo. Ny nisy aza dia nipoaka kosa tetsy andaniny ny rodorodom-panafihana nataon'ireo loharanom-baovao, na teo amin'ny tontolon'ireo blaogy izany, na tany anatin'ireo media mahazatra. Tsy nivonona sady tsy afaka nandamina ny raharaha, nandefa fanentanana i Donn Edwards izay nisarika ny sain'ireo blaogera manerana ny firenena – miaraka amin'ireo sosokevitra mba hanamboaran'ny vondrom-piarahamonina vondrona iray maharitra miandraikitra ny fanarahamaso ny fahalalahan'ireo blaogera ao amin'ny firenena.
Toy izao no zavatra fantatray:
1. Ny firaisankina no fiadiana lehibe indrindra ho anay.
Nahavita asa mahafinaritra i Donn Edwards tamin'ny alalan'ny fitanisàna ny raharaha QVC ho toy ny raharaha manohitra an'ireo blaogera rehetra ao Afrika Atsimo fa tsy fanafihana olon-tokana. Hoy i Guy McLaren:
Ny fanafihana an'i Donn ataon'ny QVC dia azo adika ho toy ny fanafihana ny fanaovana blaogy. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ireo blaogera dia manana mpamaky farafahakeliny 4, ny sasany manana mihoatra. Saingy ny zava-misy dia izao, fitaovana iray matanjaka ireo blaogy ary raha irinao ny hahazo dokambarotra ratsy, tafiho ny tontolon'ireo blaogy ary fantatro fa mahalala olona ao amin'ny onjampeo, ao amin'ny fahitalavitra ry zareo blaogera. Ny marina, ny sasantsasany amin'ireo blaogera dia avy amin'ny fampahalalam-baovao avokoa.
Ankoatra ireo lahatsoratra 40 mahery anaty blaogy sy ireo fanehoankevitra an-jatony manohana an'i Edwards, vondrona iray ao amin'ny Facebook ahitàna mpikambana maherin'ny 300 no niforona mba hahafahan'izy ireo manohana an'i Edwards, ary wiki iray koa maneho hevitra mikasika ny isan'ireo lahatsoratra tsy mitsahatra mitombo be an'ireo blaogy sy ireo lahatsoratra natokana ho an'ilay raharaha. Miaraka amin'ny fango nataony hoe “Raharaham-pitsaràna Bilaogera”, nifandray tamin'ireo blaogera hafa i Edwards tany aloha tany, nangataka azy ireo hanoratra mikasika an'io raharaha io, avy eo nandefa fanafihana an-tanmbajotra izay nampihodinkodina ny QVC. Avy eo indray, raha ezaky ny QVC ny hampangiana ilay antsoin'i Eve Dmochowska called hoe “Blaogy iray, natokana fotsiny ho an'ny fiarovana informatika, ary ireo mpanaraka azy dia mety ho tsy dia rototra loatra amin'ny fomba rehetra hiresahana ny varotra QVC”, nanana olona anjatony izao ry zareo nanao fanambaràna mitovitovy.
Ny mahatsikainky dia ny hoe, izay tokony ho lasa fanentanana mangarahara sy mitodika amin'ny vondrom-piarahamonina dia hiafara amin'ny famahana ara-pirahalahiana tsy idiran'ny fitsaràna. Hanàla ny fivadihan'ity hanjary ho fitsarana fitaratra ho an'ireo tranga mety tsy ho azo ialàna nenjehana blaogera izay mety hitranga amin'ny hoavy .
2. Tia ny tantara tsaran'i David sy Goliath ireo media lehibe
Rànga ireo sofiko indray marainan'ny volana desambra raha nahare ny mpanentana fandaharana resadresaka iray malaza, John Robbie, nitafatafa tamin'i Edwards mikasika ny raharaha QVC ao Johanesburg Talk Radio 702. Taorian'ny tafatafa, naharay antso avy amin'ireo olona hafa i Robbie izay nanana fitarainana hafa ihany koa mifandraika amin'io orinasa io. Dia nitombo hatrany ny zotom-po. Manoratra mikasika ny tantara ihany koa ny The Sunday Independent – ary vao haingana ny Noseweek.
Ny lesona? Mankamamy ny tantara tsaran'i David sy Goliath ireo media mahazatra. Nefa arotsahy ao anaty fangaro ireo blaogera sy ireo media sosialy dia ho afaka hanomboka hanontany tena ianao hoe iza no David ao anatin'ilay tantara.
3. Mitandrema. Makà fotoana hieritreretana mikasika an'ireo olona ery ankilan'ireo lahatsoratry ny blaogintsika ary fantaro ireo zo sy andraikitsika.
Angamba ny raharaha voalohany mety halaza indrindra amin'ny fanenjehana blaogera iray eo an-toerana, nasehon'ny zavatra nolalovan'i Donn Edwards ny havesa-danjan'ny fahafantarana fa, miaraka amin'ny filàntsika manakiana, dia ilaina ny mahatsapa ireo zo sy andraikintsika.
Nandefa lahatsoratra iray i Paul Jacobson mampitandrina an'ireo blaogera mba hisafidy ny “lohateny mampisy adihevitra be momba ireo olontsotra mpanao gazety”, saingy ny marina dia, na milaza tena aza isika ho “olontsotra mpanao gazety” na tsia, milatsaka ireo karazana lalàna maro rehefa manomboka mamoaka ao amin'ny tambajotra isika.
Nanoratra i Chris M. manao hoe:
‘Mampiseho fotsiny io fa amin'izao andro izao, amin'ny maha blaogera dia tena tokony hitandrina isika amin'izay lazaintsika sy amin'izay irehidrehetantsika, satria misy olona afaka mipetraka ery amin'ny tendrony iray, vonona ny hitsambikina sy hisongona antsika blaogera madinika.’
Angamba ny avy amin'i Tony Lankester no fanehoankevitra tena mivaingana indrindra.
Misy fampitandremana iray ao anatin'ny zavatra niainany, hoe ireo blaogera rehetra, anisan'izany aho, dia tokony hitandrina. Raha te-hilalao ny gonim-pasiky ny asa fanaovana gazety ianao, hianaro aloha ireo fitsipika. Na dia mihevitra ny hamotika azy ireny aza ianao. Hianaro aloha fara faharatsiny ireo lalàna ampolony izay nialoha làlana anao. Tsy hoe satria ny tontolo amin'ny tambajotra dia manoloana efijery fotsiny, dia midika izany fa tsy mihatra ireo lalànan'ny tontolo tena izy mikasika ny fanaratsiana sy fanalàm-baraka. Ary tsy hoe satria ianao dia sady tonian'ny fanoratanao, mpanao gazety, tonian'ny fandikan-dahatsoratra, tonia sy mpamoaka, tsy midika fanananao tombony hanao tsinontsinona an”ireo fepetran'ny fahaizamiaina izany, ireo fanao sy ireo fotokevitry ny fanatanterahana tsara ny asa fanaovana gazety.
Nitombo ny fanaovana blaogy ao Afrika Atsimo tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mino i Eve Dmochowska fa betsaka ny nianarantsika momba ny atao hoe manome sy mandray fanakianana ary manana lahatsoratra mendrika mikasika izay lesona azony tamin'ny taona 2008 izy.
Fa ny tena zava-dehibe indrindra, nianaran'ireo blaogera eo an-toerana ny tena maha-mavesa-danja ny fiasàna miaraka. Antenaintsika fa hisy zavatra hivoaka avy eo amin'ny hafatra eo amin'ny rindrin'ny Facebook nosoratan'i Andrew Edwards (rahalahin'i Donn) tamin'ny 29 desambra 2008:
Nangataka ahy i Donn ny mba hanakatonana ilay vondrona raha vao nivoaka teo amin'ny blaoginy fotsiny ny hafatra farany mikasika ilay tantara. Noheveriko ary fa tokony hanomboka vondrona iray vaovao isika miaraka aminà anarana vaovao sy tanjona vaovao. Misy torohevitra ve? Sahala amin'ny hoe “ny leoparda iray ve afaka manova ny hadalàny” (vondrona iray napetraka hanara-maso ny fahalalahan'ireo blaogera sy ireo orinasa masiatsiaka)??
Sary: David vs Goliath’ avy amin'ny maha-online teo amin'ny Flickr – CC BY-SA